कमरेड आज्ञा गर्नुहुन्छ... - परिहास - नेपाल
कमरेड आज्ञा गर्नुहुन्छ...
- वाटरगेट उपाध्याय
श्रीस्वस्थानीमा कुमारजीले जस्तै एमालेमा केपी ओलीजी प्रचण्डलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ, ‘कामरेड ! शेरबहादुरजीलाई भनिदिनु पर्‍यो, चाँडोभन्दा चाँडो बालुवाटारबाट बूढानीलकण्ठ निवास सर्नुपर्‍यो । रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्छन् । भोलि–पर्सि के हो के हो ? एकपटक फेरि प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबारमा फोटो टाँस्ने जिजीविषा छ ।’
प्रत्युत्तरमा कुमारजीकै शैलीमा प्रचण्ड आज्ञा गर्नुहुन्छ, ‘हे केपी कमरेड ! तपाईंका लागि बालुवाटार निवास खाली गरिदिनुपर्ने कुरा सोह्रै आना सही हो । तर, तपाईंले पनि एमाले मुख्यालयमा रहेको अध्यक्ष पदको त्यो चित्ताकर्षक कालो कुर्सी मलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा विलम्ब नगर्नुहोस् । मलाई प्रधानमन्त्री पदभन्दा पनि एमाले हाँक्ने लहड छ । मलाई पनि एमाले मुख्यालयको भित्तामा एक थान फोटो टाँस्ने रहर छ ।’
प्रचण्डजीको कथनपछि ओलीजीले कुनै पनि किसिमको आज्ञा गर्न केही दिनका लागि बन्द गर्नुभयो । आज्ञा गर्नुभन्दा स्वास्थ्यलाभ गर्नुमै आफ्नो कल्याण देख्नुभयो । इतिश्री ओली–प्रचण्ड संवाद ।